Conduit Gate Valve စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများမှတစ်ဆင့် | Convista
ဒီဇိုင်းစံ: API ကို 6D
ဒီဇိုင်းပြင်ဆင်မှုများ - မီးဘေးကင်းဒီဇိုင်း၊ အနိမ့်ထုတ်လွှတ်မှုထိန်းချုပ်မှု၊ လုံခြုံသောဂိတ်သို့မဟုတ်တိုးချဲ့သည့်ဂိတ်၊ နှစ်ကြိမ်ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်သွေးထွက်ခြင်း၊ ကိုယ်တိုင်လိုင်သက်သာခြင်း၊ အရေးပေါ်တံဆိပ်ကပ်
အရွယ်အစား:2"~ 48"
ဖိအားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်： ANSI 150lb ~ 2500lb
ကားကိုယ်ထည်ပစ္စည်း - ကာဗွန်သံမဏိ၊ သံမဏိ
ပစ္စည်းကိုချုံ့: အပျော့တံဆိပျ, သတ္တုတံဆိပျ
စစ်ဆင်ရေး: ဂီယာ, မော်တာ, ရေနံအော်ပရေတာကျော်ဓာတ်ငွေ့
၁။ နှစ်ဆသောဘောင်နှင့်ထိုင်ခုံဒီဇိုင်း ble
2. လည်ပတ်နေသော torque သည်ပုံမှန်တံခါးပေါက်အဆို့ရှင်ထက်သေးငယ်သည်။
၃။ လမ်းညွှန်တံဆိပ်များ၊ စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းအပေါ်အကန့်အသတ်မရှိ；
4. အဆို့ရှင်အပြည့်အဝပွင့်လင်းအနေအထား၌တည်ရှိ၏သောအခါ, ထိုင်ခုံမျက်နှာပြင်များအပြင်ဘက်စီးဆင်းမှုစီးကြောင်းအမြဲတမ်းတံခါးကိုနှင့်အတူအပြည့်အဝထိတွေ့ထိုင်ခုံမျက်နှာပြင်များကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ပိုက်လိုင်းပိုက်လိုင်းများအတွက်သင့်လျော်သော;
ISO 15848 လိုအပ်ချက်များအရ 7. ထုတ်လွှတ်မှုနည်းသောထုပ်ပိုးမှုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
9. ပုံမှန်အားဖြင့်ပွင့်လင်းအမျိုးအစားသို့မဟုတ်ပုံမှန်အားဖြင့်အနီးကပ်အမျိုးအစားမှတဆင့် conduit ကိုဒီဇိုင်းနှင့်အတူ;
ဖောက်သည်များ၏တောင်းဆိုမှုအရ conduit ဒီဇိုင်းအားဖြင့်လည်းရရှိနိုင်ပါသည်
ရှေ့သို့ အပြည့်အဝဂဟေဆော်သော Ball Valve တပ်ဆင်ထားသည့်သံမဏိထည်လှည်
နောက်တစ်ခု: ဘေးထွက် Entry လုပ်သံမဏိ Trunnion တပ်ဆင်ထား Ball Valve
HP ကအပူဂျာကင်အင်္ကျီ pump